pindura OST kuPST
MS Office File Kudzoreredza
Outlook Express Kugadzirisa
Outlook Express Dhiraivha Kudzorera
Outlook Dhiraivha Kudzorera
Outlook password kudzoreredza
Archive / Backup Kudzoreredza
Mufananidzo / Gwaro Kudzorera
Data Kudzoreredza / Faira Usabvisa
Dhata Yekudzora Suite
Negadziriro yeparutivi / Misc Software
30 zuva mari musana zvinovimbisa
musha Products DataNumen Exchange Recovery pindura OST Faira kuPST Faira
kushandisa DataNumen Exchange Recovery Kuchinja OST Faira kuPST Faira
4.90 / 5 (kubva 1,521 mavhoti)
Nekuti Microsoft Outlook haigone kuvhura offline folder (OST) faira zvakananga, kana iwe uchida kuwana iyo data mu OST faira, iwe unofanirwa kuishandura kuita PST faira iyo inogona kuzivikanwa neAptlook.
Dzimwe mamiriro akajairwa kana iwe uchida kushandura OST kuPST ndeiyi:
Iyo Exchange mailbox inobatana ne OST faira haripo nekuda kwezvimwe zvikonzero uye iyo OST faira inherera. Iwe unofanirwa kutora iyo data kubva mairi.
The OST faira yakaora kana kukuvara. Unoda kupora iyo data irimo.
Iwe unoda kutora imwe data iyo inongowanikwa mune yemuno OST ikwidzwe.
ne DataNumen Exchange Recovery, unogona kushandura OST faira kuPST faira nyore uye zvine mutsindo.
Free download100% Kuchengetedza
Tenga izvozvi100% Kugutsikana Guarantee
Kuchinja OST kuPST faira, ndapota ita zvinotevera:
Cherechedza: Usati washandura iyo OST faira kuPST faira ne DataNumen Exchange Recovery, ndapota vhara Microsoft Outlook uye chero mamwe maapplication anogona kuwana kana kugadzirisa iyo OST ikwidzwe.
Sarudza iyo OST faira inoshandurwa:
Unogona kuisa iyo OST faira zita zvakananga kana tinya iyo bhatani rekutarisa uye sarudza iyo faira. Iwe unogona zvakare kudzvanya iyo bhatani kuti uwane iyo OST faira rinoshandurwa pakombuta yemuno.
By default, DataNumen Exchange Recovery ichashandura iyo OST faira muPST nyowani faira inonzi xxxx_recovered.pst, uko xxxx ndiro zita renyanzvi OST faira. Semuenzaniso, for source OST faira Chinyorwa.ost, iyo default yakashandurwa PST faira ichave Source_recovered.pst. Kana iwe uchida kushandisa rimwe zita, ndokumbira usarudze kana kuriseta saizvozvo:
Unogona kuisa zita refaira rePST zvakananga kana kudzvanya iyo bhatani rekutarisa uye sarudza iyo PST faira zita.
Baya bhatani, uye DataNumen Exchange Recovery kuda start kuongorora uye kushandura data kubva kunobva OST faira kunzvimbo yekuenda PST faira. Kufambira mberi kubhawa
zvicharatidza kufambira mberi.
Mushure mekushandurwa, kana iyo data yashandurwa zvinobudirira, iwe uchaona bhokisi remeseji rakadai.
Iye zvino unogona kuvhura iyo yakashandurwa PST faira neMicrosoft Outlook uye nekuwana iyo data irimo.
pindura OST Faira kuPST Faira
Titevere kana kufanana nesu paFacebook, LinkedIn uye Twitter kuti uwane kushambadza kwese, nhau dzichangoburwa uye kugadzirisa pane zvigadzirwa zvedu nekambani
DataNumen Access Repair 3.8 inoburitswa muna Kukadzi 23, 2021
DataNumen Outlook Drive Recovery 8.5 inoburitswa muna Kukadzi 18, 2021
DataNumen Exchange Recovery 8.5 inoburitswa muna Ndira 28, 2021
Kutsigira uye Maintenance Policy
Copyright © 2021 DataNumen, Inc. - Kodzero dzose dzakachengetedzwa.